eDeshantar News | नक्कली बिहे गर्दै चीनमा नेपाली युवतीको चीनमा तस्करी! - eDeshantar News नक्कली बिहे गर्दै चीनमा नेपाली युवतीको चीनमा तस्करी! - eDeshantar News
काठमाडौं । रोजगारीको प्रलोभन दिँदै म्यारिज भिसामा चीन पुऱ्याइएकी एक २० वर्षीया युवती १० महिना लामो नारकीय जीवन बिताएर गत १२ कात्तिकमा स्वदेश फर्किइन् । चिनियाँ युवकसँग बिहे गराएर सोलुखुम्बुकी उनलाई २५ पुस ०७६ मा चीन पुऱ्याइएको थियो ।
ती युवती स्वदेश फर्केपछि चीनमा बच्चा जन्माउनकै लागि नेपाली युवतीहरूको तस्करी भइरहेको नयाँ तथ्य खुलेको हो । उनलाई चीन पुर्‍याउन संलग्न रहेको आरोपमा काभ्रेका किरण तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एसएसपी डा. देवबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
‘मलाई राखिएकै घरमा अरू नेपाली महिलाहरू पनि छन्, उनीहरूलाई पनि त्यसैगरी बच्चा जन्माउन बाध्य बनाइएको छ,’ पीडित युवतीले प्रहरीसँग भनेकी छिन् । हाल थुनामा रहेकी मीना लामाको समूहले उनलाई चीन पुर्‍याएको थियो । उक्त समूहले मात्र दुई सयजनाभन्दा बढी नेपाली युवतीलाई बिहे गरेर चीन पठाई बच्चा जन्माउन प्रयोग गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । मानव बेचबिखन मुद्दामा फरार रहेकी लामा र उनका पति श्यामकुमार लामालाई इन्टरपोलको सहयोगमा कुवेतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।
साथीको पहलमा उद्धार
आफूलाई गाउँको घरमा बन्धक बनाई गर्भधारण गर्न बाध्य बनाइएपछि ती युवतीले नेपालमा रहेकी एक साथीलाई वी च्याटमार्फत सम्पर्क गरेकी थिइन् । तिनै साथीमार्फत शक्ति समूह, नेपाल प्रहरी हुँदै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावाससम्म जानकारी गराइएको थियो । दूतावासको पहलमा चीनको प्रहरीले उनलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको हो । उनी १२ कात्तिकमा काठमाडौं उत्रेकी हुन् ।
पीडित युवतीले बताएअनुसार कतिपय नेपाली महिला बाध्यतावश त्यहीँ बसेका छन् । केहीले २-३ वटासम्म बच्चा जन्माइसकेका छन् । ‘एउटा बच्चा जन्माएपछि जागिरमा लगाइदिने प्रलोभन दिइन्छ,’ ती युवतीले प्रहरीलाई भनेकी छन्, ‘नेपाल फर्किँदा आफ्नो गोपनीयता रहँदैन भनेर पनि केही दिदीहरू उतै बसेका छन् ।’
चीनमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या कम भएकाले बच्चा जन्माउनकै लागि नेपालबाट युवतीहरूको तस्करी भएको हुन सक्ने शक्ति समूहका अधिवक्ता दिलीप कोइराला बताउँछन् ।
भाडामा कोख अर्थात् ‘सरोगेसी’ पनि एक किमिसको मानव तस्करी नै भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । खासमा, सरोगेसीका लागि महिलाको कोख मात्र प्रयोग हुने विश्वव्यापी ट्रेन्ड छ । तर, चीन पु¥याइएका नेपाली युवतीहरूलाई जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्न बाध्य बनाइने गरेको छ ।
नेपालबाट चीनमा बिहेको नाममा युवतीको तस्करी भइरहेको ०७१ सालमै खुलेको थियो । त्यतिवेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले काठमाडौंका केही म्यारिज ब्युरोका सञ्चालकलाई पक्राउ पनि गरेको थियो ।
यस्तै, भदौ ०७६ मा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले चार चिनियाँसहित १० जनाको गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिवेला बिहे गरेर चीन पुगेका चार युवतीको उद्धार गरिएको थियो । त्यस घटनाको अनुसन्धानका क्रममा एक युवतीलाई चीन पुर्‍याउँदा १० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलेको छ । उक्त गिरोह पक्राउ परेयता पनि चीनमा युवतीहरू तस्करी हुने क्रम नरोकिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
बेहुला पनि भाडामा
चीनमा नेपाली युवती तस्करीका लागि भाडाका बेहुला प्रयोग हुने गरेको छानबिनमा खुलेको छ । नेपाली युवतीसँग बिहे गरेका युवक चीन पुगेपछि बेपत्ता हुन्छन् । चिनियाँ युवालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी नेपाल ल्याउने र बिहे गराएर चीन पुर्‍याई अन्य गतिविधिमा लगाउने गरिएको छ ।
अधिकांश घटनामा भाडाका बेहुला नै प्रयोग हुने गरेको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन् । विगतमा बिहे गरेर चीन पुर्‍याइएका युवतीलाई युवककै घरमा राखी यौन र श्रम शोषण हुन्थ्यो । पछिल्लो समय बच्चा जन्माउनका लागि मात्र लैजान थालिएको नयाँ तथ्य सामुन्ने आएको छ । नेपाल मात्र नभई पाकिस्तान, म्यानमार, बंगलादेश र भुटानबाट पनि नक्कली बिहे गरी युवतीहरूलाई चीन पुर्‍याइने गरेको छ । नयाँ पत्रिका